यस्तो छ डिभी लोटरी भर्ने सही तरिका - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन १७, २०७५ समय: ७:२४:१७
अमेरिकाको ग्रिनकार्ड पाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका डिभी लोटरीका लागि अक्टोबर ३ तारिख पूर्वीय समय अनुशार मध्यान्हदेखि आवेदन दिन सकिने भएको छ । डिभी लोटरी खुल्ने वा नखुल्ने अन्यौल समाप्त गर्दै पुन एकपटकका लागि डिभी लोटरी खुल्ने भएको छ । आगामी अक्टोबर ३ तारिख पूर्वीय समय अनुशार मध्यान्हदेखि नोभेम्बर ६ तारिख मंपूर्वीय समय अनुशार मध्यान्ह १२ बजेसम्म डिभी लोटरी भर्न सकिने अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटका तर्फबाट जारी सुचनामा जनाइएको छ ।
अमेरिकी कङ्ग्रेसको कार्यादेश प्राप्त डाइभर्सिटी आप्रवासी भिसा कार्यक्रम अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्दछ । आप्रवासन तथा राष्ट्रियतासम्बन्धी ऐनको दफा २०३(सी) ले ऐतिहासिक रूपमा कम दरमा संयुक्त राज्य अमेरिका आप्रवासन गर्ने देशका व्यक्तिहरूलाई “डाइभर्सिटी आप्रवासी” का रूपमा एक वर्गको हैसियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२० का लागि ५०,००० डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) उपलब्ध गराइनेछ । डिभीका लागि दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन ।
– के तपाईँको जन्म त्यस्तो देशमा भएको हो जहाँका नागरिक डिभीका लागि योग्य छैनन्तर तपाईँका दुबै आमाबुबाको जन्म आफू जन्मेको देशमा भएको होइन वा तपाईँको जन्म भएको बेला उक्त देशमा वैध रूपमा बसोबास गरिरहेका थिएनन्? यदि हो भने तपाईँले आफ्नो आमाबुबाको जन्मदेशको नागरिकताको हक दाबी गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि सो देशका नागरिक डिभी–२०१९ कार्यक्रमका लागि योग्य हुनुपर्नेछ । यसका बारे थप जानकारीका लागि बारम्बार सोधिने प्रश्नमा हेर्नुहोस् ।
डिभी–२०२० को लागि आवेदन हाल्नका लागि www.dvlottery.state.gov मा गई अक्टोबर ३ तारिख पूर्वीय समय अनुशार मध्यान्हदेखि नोभेम्बर ६ तारिख मंगलबार पूर्वीय समय अनुशार मध्यान्ह १२ बजेसम्म इलेक्ट्रोनिक रूपमा दर्ता गर्नु पर्दछ । म्याद नाघेपछिको आवेदन वा कागजीय आवेदन स्वीकार गरिने छैन । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एकभन्दा बढी आवेदन परे नपरेको पत्ता लगाउन सुविज्ञ प्रविधिको प्रयोग गर्दछ । एकभन्दा बढी आवेदन हाल्ने आवेदकहरू डिभीका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् ।
डिभी–२०२० कार्यक्रममा लागि विद्युतीय आवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया
आवेदन दर्ता गरेपछि तपाईँले एक “कन्फर्मेशन स्क्रिन” देख्नुहुनेछ जसमा तपाईँको नाम र युनिक कन्फर्मेशन नम्बर हुन्छ । आफ्नो अभिलेखको लागि उक्त “कन्फर्मेशन स्क्रिन” लाई प्रिन्ट गर्नुहोस् । सन् २०१९ मे ७ देखि तपाईँले आफ्नो डिभी–२०२० आवदेनको स्टेटस चेक गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसको लागि www.dvlottery.state.gov मा गई “एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक” (Entrant Status Check) मा क्लिक गरी आफ्नो युनिक कन्फर्मेशन नम्बर र व्यक्तिगत जानकारी हाल्नुहोस्। तपाईँंले आफू डिभी–२०२० का लागि छनोट भए नभएको पत्ता लगाउन र आफ्नो आप्रवासी भिसा अन्तर्वार्ता अपोइन्टमेन्ट मिति चेक गर्नका लागि एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक प्रयोग गर्नु पर्दछ । अमेरिकी सरकारले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा सूचित गर्दैन । एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक आफ्नो आवेदनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्देशनहरूको एक मात्र स्रोत हो । छनोट प्रक्रियाबारे थप जानकारीका लागि बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू हेर्नुहोस् ।
आवेदन भर्नका लागि तपाईँलेनिम्न जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्दछ :
७. फोटो(हरू) – आफ्नो, आफ्नो पति÷पत्नी तथा आवेदनमा उल्लिखित सबै सन्तानको हालै खिचिएको फोटो ( पछिल्लो छ महिनामा खिचिएकोहुनुपर्ने) । फोटोसम्बन्धी मापदण्डका लागि डिजिटल फोटोबुझाउनेसम्बन्धी हेर्नुहोस् । यदि तपाईँको पति/पत्नी अमेरिकी नागरिक वा वैध स्थानीय बासिन्दा हो भने तपाईँले उनीहरूको फोटो राख्न जरुरी छैन तर राख्नुभएको खण्डमा पनि तपाईँको आवेदन भनेरद्द हुने छैन । सामूहिक फोटो स्वीकार हुने छैन । प्रत्येक व्यक्तिको छुट्टै फोटो राखिनुपर्दछ । यदि फोटो पछिल्लो छ महिनामा नखिचिएको, मिलाइएको वा तल उल्लेख गरिए अनुरूपका आवश्यकताहरू पूरा नभएको खण्डमा तपाईँको आवदेन रद्द हुनसक्छ वा तपाईँलाई भिसा जारी नहुन सक्छ । थप जानकारीका लागि डिजिटल फोटो बुझाउनेसम्बन्धीमा हेर्नुहोस् ।
डिभी कार्यक्रमका लागि विद्युतीय आवेदन कसरी भर्ने बारे थप जानकारीका लागि बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू हेर्नुहोस् ।
हरेक क्षेत्र र देशका लागि छुट्याइएको सङ्ख्याको आधारमा योग्य आवेदनहरूमध्येबाट गोलाप्रथाको माध्यमबाट आवेदकहरूको छनोट कम्प्युटरद्वारा गरिन्छ । सबै डिभी आवेदकहरूले आफूडिभी कार्यक्रमको लागि छनोट भए नभएको पत्ता लगाउन आवेदन दर्ताका बेला प्राप्त युनिक कन्फर्मेशन नम्बर प्रयोग गरी ई–डिभी वेबसाइटको एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेकमा गई हेर्नु पर्दछ ।
यदि तपाईँको आवेदन छनोटमा परेको रहेछ भने तपाईँकन्फर्मेशन पेजमा पुग्नु हुनेछ जसमा अमेरिका अप्रवासन गर्न लाग्ने शुल्क लगायतका जानकारीका साथै थप निर्देशनहरू दिइएको हुन्छ । डिभी का लागि छनोट भएकाहरूले केवल एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक मार्फत मात्र छनोट भएको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले छनोट भएको सूचना चिठी वा ईमेलमार्फत पठाउँदैन । अमेरिकी दूतावास र वाणिज्यदूतावासहरूले छनोट भएकाहरूको सूची उपलब्ध गराउँदैनन्। छनोटमा नपरेकाहरूले पनि सूचना पाउने थलो भनेको एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक हो । सूचनाका लागि अरुकोभर पर्नुको सट्टा तपाईँलाई हामी एन्ट्रेन्ट स्टेटस चेक आफै हेर्नुहुन जोड गर्न चाहन्छौँ ।
राजस्थानमा बस दुर्घटना : १० को मृत्यु
भारतको राजस्थानस्थित बिकानरमा बस दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ । २२ जना घाइते छन् । बिकानर जिल्लामा पर्ने राष्ट्...
दाइ ! यहाँ सुसाइड गर्न मिल्छ ?
कोही त्यो ठूलो रूखतिर हँस्याङ–फस्याङ गर्दै गइरहेको देख्छु । हातमा डोरी पनि छ । यो मान्छे हाम्रो ठाउँको होइन । यो पनि बुझ...
किन मारियो एकैपल्ट ४७ हजार सुगुर
दुई कोरियाली मुलुकको सीमाक्षेत्रमा पर्ने इन्जिम नदी दशौं हजार सुंगुरको संहारका कारण रक्ताम्मे भएको छ । दक्षिण कोरियाले ‘...